Shayton Equilibrium Hypercar - Dhizaini magazini
Hypercar Shayton Equilibrium inomiririra yakachena hedonism, kutsveyamiswa pamavhiri mana, pfungwa isinganzwisisike kune vanhu vazhinji uye kuziva kwezviroto kune vane rombo vashoma. Iyo inomiririra yekupedzisira mafaro, maonero matsva ekubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe, uko iyo chinangwa haina kukosha sechiitiko. Shayton yakaiswa kuti iwane miganhu yekukwanisa kuita zvinhu, kuyedza dzimwe nzira nyowani dzakasvibirira uye zvigadzirwa zvinokwanisa kuwedzera basa mukati nekuchengetedza mutsindo weiyo hypercar. Chikamu chinotevera ndechekutsvaga iye anoisa mari / s uye oita kuti Shayton Equilibrium ive chaiyo.
Zita rechirongwa : Shayton Equilibrium, Vagadziri zita : Andrej Stanta, Izita remutengi : Shayton Automotive.
Mota, kufamba uye dhizaini yekugadzira